Nin Soomaali oo xabsiga laga siidaayay ka dib tuhun argagixiso | Somaliska
Sida ay xasuustaan akhristayaasha Somaliska.com wiil soomaaliyeed ayaa lagu xiray Stockholm bishii la soo dhaafay kaasoo lagu tuhmay argagixiso. Hadaba sida uu qoray Sveriges Radio wiilkaas ayaa xabsiga laga siidaayay hada.
Nin 26 jir ah asalkiisuna Soomaali yahay dagganna magaalada Stockholm kaas oo laba usbuuc ka hor loo xirey laguna tuhmey fal argagixisnimo oo la damacsanaa in dalka soomaliya laga fuliyo ,ayey maalintii shaley go'aamisey maxkamad ku taala degmada Solna in ninkaas xabsiga lagu sii hayo. Danbi-baare Agneta Hilding Qvanström ayaa sheegtey in danbiga wiilkaan lagu soo oogey aasaas looga dhigey isla danbigii la xiriirey tuhunka argagixisnimo kaas oo lagu soo oogey 24-kii bishii juun. Qvansröm ayaan ilaa hadda garaneeyn xilliga wiilkaan maxkamad la soo taagi doono. Ninkaan ayaa isagu ahaa mid markasta inkirayey in uu danbigaas galey.
Nin 26 jir ah asalkiisuna Soomaali yahay dagganna magaalada Stockholm kaas oo laba usbuuc ka hor loo xirey laguna tuhmey fal argagixisnimo oo la damacsanaa in dalka soomaliya laga fuliyo ,ayey maalintii shaley go’aamisey maxkamad ku taala degmada Solna in ninkaas xabsiga lagu sii hayo.
Danbi-baare Agneta Hilding Qvanström ayaa sheegtey in danbiga wiilkaan lagu soo oogey aasaas looga dhigey isla danbigii la xiriirey tuhunka argagixisnimo kaas oo lagu soo oogey 24-kii bishii juun.
Qvansröm ayaan ilaa hadda garaneeyn xilliga wiilkaan maxkamad la soo taagi doono.
Ninkaan ayaa isagu ahaa mid markasta inkirayey in uu danbigaas galey.